"Renault Kumnandi" - production imoto isiFulentshi, elalingelamaFilisti ekilasini phambi-wheel drive sedan ezihlangene. Kukhona imoto ne-yalolucwaningo 90. Uma kuhlelelwa onjiniyela yakhe wathatha njengesisekelo umklamo hatchback «Renault Clio». Okokuqala, imoto entsha engakaze lavuselelwa okusezingeni eliphezulu phakathi abashayeli, kodwa futhi emakethe emhlabeni ayizange uhlela ukuletha. Nokho, isimo sashintsha ngokuphelele ngo-2002 lapho French wenza imodeli sina restyling. Kusukela ngaleso sikhathi, lo eseyintsha uye abe omunye oyisilomo ekilasini yayo. Kodwa yini "Renault Kumnandi" Izibuyekezo wabanikazi futhi Ukucaciswa? Izimpendulo yonke le mibuzo nokuningi utawufundza Ukubuyekeza namuhla yethu.
"Renault Kumnandi" - libuyekeza abanikazi kanye nomklamo ukubuyekeza
Okokuqala abashayeli agcizelele aqinise yesimanje, okwakubekelwa eziqediwe inkambo restyling. Eqinisweni, abaklami French kabutjha ngokuphelele emzimbeni imoto. Ngokwesibonelo, phambi ingxenye "Reno Kumnandi 14 'sicutshungulwe ngokuphelele. Ngakho, imoto yazuza izibani ezintsha elingunxantathu, bumper nge inkungu edidiyelwe (njengoba ejwayelekile endaweni yabo ukuwo Imigudu) futhi ihlukaniswe yaba izingxenye 2 Izinsimbi, okuyinto wabekwa phakathi logo-chrome lenkampani. Front, izinhlangothi futhi emuva abe plastic udini eside. Ngokuvamile, mayelana nomklamo entsha "Renault Kumnandi" abanikazi izibuyekezo ukubonisa thuthuva. Restyling uye waphumelela kangangokuthi ngisho manje, ukuma imoto akaphelelwa ngokuhlathulula ukusebenza kwawo
"Renault Kumnandi" - Izibuyekezo wabanikazi wezangaphakathi
Ngaphakathi imoto, isondo entsha ayo futhi LCD screen encane ku console isikhungo. Ngaleso sikhathi, lezi ngabaqaphi bebelokhu isihloko okunethezeka nomona kulabo abanikazi imoto, ngakho nemishini kagesi "Renault Kumnandi" Lesi esinye sezenzakalo eziphambili kakhulu ekilasini yayo. Lesi sibonakaliso ubonisa ngokucacile ulwazi kusuka imoto ikhombisa izinga lokushisa wamanje "olwandle". Interior design ezimbili ithoni: phezulu ubuswa amathoni grey, ngezansi - ukuxegiselwa (amazinyo endlovu umthunzi). Ngokukhethekile ikhokhelwa izinga kokuphothula "Renault Kumnandi." Izibuyekezo ziye zaphawula khona abanikazi plastic entsha, okuyinto hhayi ngokomzwelo futhi sikazibuthe emgwaqweni, kanye isikhumba enhle ezinemibala egqamile. I ethile kuphela kwaba ukuntuleka tachometer ku iphaneli sensimbi (nesimo esifanayo ne-Korean "Daewoo Nexia" in the '90s). On wonke angaphakathi Sedan kubukeka okuqinile kakhulu futhi ehloniphekayo.
Ukucaciswa "Renault Kumnandi" imoto
Injini ku "French" kwaba uphethiloli. Iphakethe kuhlanganisa vosmiklapanny-1.4 litre injini ne yokudlulisela inhlukano 5 izinyathelo. Ngemva kwesikhashana powertrain uhlelo agcwaliswa izitshalo ezimbili shestnadtsatiklapannymi (diesel nophethiloli). Gasoline injini nge displacement 1.6 amalitha ine okukhiphayo 107 amahhashi. Udizili iyunithi ivolumu 1.5 amalitha yayinelungelo zabo omncane 65 "amahhashi" ngesikhathi.
Ngahlala phansi ibhethri, ukuthi ungaqala kanjani imoto? Kanjani ukuze uthole imoto bebodwa, uma ibhethri useye wahlala
"Pilkington" - ingilazi yezimoto ezivela kumkhiqizi onokwethenjelwa
Gaz 3110 "iVolga": ezibekiweko lobuchwepheshe, incazelo, isithombe
Umbhali we formula ngokuwina ilotho uPlato Tarasov. Lottery: ukubuyekezwa ukuphumelela ifomula
I ngesivinini esiphezulu kwi-Inthanethi, ahlinzekwa ngaphakathi ubuchwepheshe besimanje
"Umthelela Double": nabalingisi ngesakhiwo